Ra'iisal Kheyre oo ku dhawaaqaya Golahiisa Wasiiradda - Worldnews.com
Ra'iisal Kheyre oo ku dhawaaqaya Golahiisa Wasiiradda
MUQDISHU, Somalia- Ra'iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo uu ku dhawaaqo Golahiisa Wasiirrada, waxaan kasoo muuqan doono wajiyo aan ku cusbayn Siyaasadda dalka.
Illo wareedyo ku sugan Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in Golaha Wasiirada cusub ay ka
Barlamanka Somalia oo codsaday in lagu dhakhsado soo magacaabista Wasiirrada
MUQDISHU, Somalia- Barlamanka Federaalka Somalia ayaa ugu baaqay Ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inuu kusoo dhaqsado magacaabista Golaha Wasiirrada, oo waqtigii loo...
MUQDISHU, Somalia - Ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ku dhawaaqay Golahiisa wasiirada cusub, oo ka kooban 26 Xubnood, kuwaasi oo ay ku jiraan Shaqsiyaad hore uga soo...
Xubnaha laga yaabo in Puntland ku matalaan xukuumadda Somalia [Warbixin]
MUQDISHU, Somalia- Wararka laga helayo xarunta Madaxtooyada Somalia iyo xafiiska Ra’isal wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegaya in wada-tashiyadii ugu dambaysay laga...
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo kormeeray xarumo dowladeed [Sawirro]
MUQDISHU, Somalia- Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah xarumaha Wasaaraddaha dowladda ee ku yaalla...
Gareowe Online 2017-04-18
Ra'iisal wasaare Kheyre oo la kulmay Keating
MUQDUSHU, Somalia - Ra'iisal wasaaraha dowladda Federaalka Somalia, Xasan Cali Kheyre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Ergayga QM u qaabilsan arrimaha Somalia Michael...
MUQDISHU, Somalia - Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Somalia Michael Keating ayaa Maanta Muqdishu kula kulmay Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xasan Cali Kheyere iyo...
Gareowe Online 2017-03-05
MUQDISHU, Somalia - Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Somalia Michael Keating ayaa Maanta Muqdishu kula kulmay Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Xasan Cali Kheyere iyo Gudoonka aqalka sare ee Barlamanka. Kulanka oo ka dhacay Villa Somalia ayaa waxay mas'uuliyiintu uga hadleen arrimo dhowr ah, oo ay kamid yihiin Gurmadka Abaaraha, magaciibista Golaha Wasiirrada iyo Caqabadaha...
​Ra\_'iisul Wasaare Kheyre oo helay Kalsnoonida Barlamanka Somalia
MUQDISHU, Somalia - Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Ra'iisul wasaare cusub ee dhawaan la magacaabay Xasan Cali Kheyre. 23-kii February ayaa Madaxweyne Maxa'ed Cabdullaahi Farmaajo u xushay wasiirka Koowaad ee Xukuumadda lasoo dhisi doono. Xildhibaano gaaraya 231 mudane, oo maanta soo xaadiray Kalfadhiga 1-aad ee...
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka cusub ee Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa saaka oo Axad ah soo gaarey magaalada Muqdisho. Axmed Ciise Cawad ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle kusoo dhaweeyay Wasiirro, Xildhibaano, Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo Wasaaradda...
Horjooge katirsanaa Al Shabaab oo dowladda Somalia isu-soo dhiibay
GARBAHAREY, Somalia- Horjooge sare oo katirsan Kooxda Al shabaab oo lagu magacaabo Maxa'ed Cabdullaahi Xaaji (Cirro) ayaa isku dhiibay maamulka degmada Garbahaarey ee dowladda federaalka Somalia. Cirro, ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa madaxa Canshuuraha Al Shabaab ee Tuulo-Barwaaqo, oo ku dhaw magaalada Garbaharey, ee xarunta gobolka Gedo. Wararka...
​Puntland: Xilalka golaha xukuumadda oo la raadinayo
GAROWE, Puntland- Siyaasiyiin kala duwan oo dalka iyo dibada ku sugan ayaa dadaal ugu jira inay kasoo dhex muuqdaan liiska golaha wasiirrada Puntland ee la filayo in Madaxweyne Gaas ku dhawaaqo mudada ka harsan 21 cisho ee Dastuurku siinayo. Arrintan oo aad looga dareemayo deegaanada Puntland, ayaa timid markii Talaadadii hore golaha Barlamanka Puntland kala direen golahii...